Niteraka savorovoro ny fivakisan’ny tohodrano Brumadinho tao São Paulo manana tohodrano 7000 ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
"Matahotra ny rehetra, matahotra izay rehetra akaiky tohodrano”
Voadika ny 12 Mey 2019 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, Français, Português
Mponina mandray anjara tamin'ny fivorian'ny Antenimieram-pirenena | Sary: Guilherme Gandolfi/azo ampiasaina
Navoaka teo ambanin'ny fiarahamiasa eo amin'ny Global Voices sy Agência Mural ity lahatsoratra izay nosoratan'i Jéssica Moreira sy Ira Romão ity.
Tamin'ny 25 janoary 2019, tohodrano iray no vaky tao Mina do Córrego do Feijão, tao an-tanànan'i Brumadinho, ao amin'ny fanjakana Minas Gerais, izay tantanin'ny orinasa mpanao fitrandrahana antsoina hoe Vale. Nahafatesana olona 235 ny loza ary 35 tsy hita popoka. Niresaka heloka bevava amin'ny tontolo iainana sy vono olona iniana atao ny mpampanoa lalàna ao Minas Gerais.
Nanjary ahiahy niadian-kevitra be teo amin'ny fanjakana manodidina an'i São Paulo, indrindra indrindra tao Perus, distrikan'ny renivohim-panjakana izany loza izany. Tamin'ireo tohodrano 7.449 ao amin'ny fanjakan'i São Paulo, roa no miorina ao Perus, saingy tsy mahafantatra momba izany ny ankamaroan'ny mponina, na dia telopolo taona taorian'ny nanorenana azy aza.
Tamin'ny 20 marsa, nanao ny hetsika “Voaaro ve isika?” ireo mponina sy mpikambana ao amin'ny hetsika ara-tsosialy ao amin'ny distrika mba hiresaka ny fepetran'ny tohodrano sy hampahafantatra ny olona momba ireo fepetra fisorohana noraisin'ny orinasan'ny fitrandrahana sy ny Fiarovana Sivily ao amin'ny faritra.
Nilaza ny talen'ny sekoly iray eo an-toerana, profesora Franciele Busico Lima fa nanontaniana isan'andro momba ny tohodrano izy. Nanatevin-daharana ireo mpikambana hafa ao amin'ny hetsika ara-tsosialy ao amin'ny manodidina ity mpampianatra 49 taona ity mba hanao fivoriana sy hijery ny fomba hampahafantatra ny mponina momba ireo loza mifandraika amin'ny tohodrano.
“Nahita tamin'ny fampitam-baovao ny rehetra. Tsy nahafantatra izahay. Fantatray ny fisian'ireo toerana famakiam-bato saingy tsy fantatray ny fisian'ny tohodrano, na ny olana mety aterak'izany. Te-hahafantatra izahay”, hoy izy.
Raha nankany amin'ny biraon'ny Fiarovana sivily ireo mpikambana ao amin'ny Hetsiky ny Olona voakasiky ny Tohodrano (MAB), vondrona nasionaly mpiaro zo, mba hanangona ny drafitra vonjimaika momba ny tohodrano, nolazaina izy ireo fa ho vonona amin'ny 8 marsa izany. Tamin'ny faran'ny volana marsa, mbola tsy nahazo ilay drafitra ny fkambanana.
Franciele works at Cieja Perus, where students were asking about the dams | Image: Ira Romão/Agência Mural . Miasa ao amin'ny Cieja Perus i Franciele, ary nanontany azy momba ireo tohodrano ny mpianatra| Sary: Ira Romão/Agência Mural
Nasain'ny Agência Mural mba haneho hevitra, nilaza ny Fiarovana Sivily fa efa nomena ny endriky ny drafitra voalohany. Na izany aza, “alohan'ny hamoahana izany ho an'ny fiarahamonina, dia hisy ny fandinihan'ny andrim-panjakana miaraka amin'ny fampifanarahana sy fanovana amin'ny Drafitra Vonjimaika”
Manao fanentanana taorian'i Brumadinho
Mihetsiketsika ireo mponina ao São Paulo hatramin'ny andro voalohany taorian'ny loza nitranga tao Brumadinho (tanàna 554 km miala ao aminy).
Tamin'ny volana febroary, nikarakara fivoriana ho an'ny vahoaka tao amin'ny Antenimieram-pirenena (Alesp) ny MAB, izay nahitana olona maherin'ny 200 voakasiky ny tohodrano manerana ny fanjakana, anisan'izany ny faritr'i Perus sy ireo tanànan'i Pedreira, Americana, Votorantim, Vale do Ribeira, Santos, Cubatão sy Bertioga.
“Mahagaga fa maherin'ny 7 arivo ny isan'ireo tohodrano misy ao amin'ny fanjakana – karazana “baomba” izay mety hipoaka amin'ny fotoana rehetra izy ireo”, hoy i Liciane Andrioli, 38 taona, mpikambana ao amin'ny MAB.
Toy ny teoeram-piaingana ho amin'ny fikatrohan'ny vahoaka mikasika ny fivoaran-draharaha ny hetsika. “Ny fihetseham-po naterak'izany taminay dia ny nanokafanay boaty mainty ao amin'ny fanjakana São Paulo nahitana ireo toe-javatra, izay mahagaga anay, fa natao tsy ho hita maso”, hoy i Liciane. “Samy nampiseho torohay ny Vale sy ny orinasa Alemaina momba ny fanamarinana (certification) [TÜV-Süd, tompon'andraikitra nanome fanamarinana fa tsara aro ny tohodrano ao Brumadinho] fa tsy nisy izany ny olana, kanefa niharan'ny iray tamin'ireo loza ara-tsosialy, arak'asa sy ara-tontolo iainana goavana indrindra teo amin'ny tantaran'ny firenena isika” hoy izy.
“Tsy misy olona mahafantatra izay mitranga ao anatin'ny orinasa. Fantatr'izy ireo fotsiny fa te-hitrandraka izy ireo. Ary tsy raharahiana ny resaka fiarovana. Matahotra ny olon-drehetra, miahiahy ny rehetra monina eo akaikin'ny tohodrano”, hoy i Cleiton Ferreira, 34 taona, mponina ao Perus sady mpandrindra ny Fikambanana Ara-kolontsaina Quilombaque.
Raha tsy manana ireo drafitra vonjimaika, dia sarotra ny mahafantatra hoe firy ny isan'ny mponina mety ho voakasika ao amin'ny faritra. Olona maherin'ny 144.000 monja no monina ao amin'ny distrikan'i Perus, ary hatramin'ny loza Brumadinho, miaina ao anatin'ny ahiahy ny olona. Nisy ny adihevitra maro tao amin'ny aterineto mikasika ny lohahevitra tao amin'ny vondrona tahaka ny “Naman'i Perus Ofisialy”, izay ahitana mpikambana 77.000 ary nahitana fanehoan-kevitra 300 mahery maneho ahiahy sy fahakiviana noho ny tsy fisian'ny torohay.
Hita eny an-dalambe, eny an-tsekoly, toeram-pitsaboana sy ny toeram-bahoaka hafa ao amin'ny faritra ny fahatsapana tahotra. Ny fanontaniana lehibe dia hoe: aiza ny drafitra vonjimaika ary nahoana tsy mba naseho tamin'ny mponina mihitsy?
Antsoina hoe Pedreira Juruaçu ny iray amin'ireo tohodrano. Fitehirizan-drano mahazaka hatramin'ny 3,1 tapitrisa metatra toratelo, ao amin'ny faritra manana velarana 192.000 metatra toradroa, ary ahitana fako avy amin'ny famokarana vato kely, indrindra ny fasika madinika sy ny tanimanga. Ny orinasa Embu S.A, niorina tamin'ny taona 1988 no tompon'izany.
Nifandray tamin'ny Embu ny Agência Mural, ary araka ny filazan'ilay injeniera Marco Antônio Martins, efa feno ilay fitoeran-drano. “Namboarina, notanterahina sy mandeha amin'ny fampiasana fomba famenoana rano mitifitra avy any ambany ny rafitra, heverin'ireo injeniera fa azo antoka indrindra ho an'ny karazana tohodrano tahaka izany”, hoy izy.
Nilaza koa izy fa efa nandray fanapahan-kevitra hijery fomba hafa amin'ny fanesorana ireo fako ny orinasa, na dia talohan'ny loza Brumadinho aza. “Mahatsiaro voaaro sy milamina ny ao amin'ny fitantanana ny Embu S.A. sy ny ekipa teknika mba hanamafy fa azo antoka ny fiarovana sy ny fahamarinan-toeran'ny tohodrano Pedreira Juruaçu”, hoy izy.
Ahitana fitehirizan-drano ny tohodrano hafa ary ny orinasa Territorial São Paulo Mineração Ltd, nitsangana tamin'ny taona 2000 no tompony.
Manana haavo 25 metatra ity tohodrano ity, ary halava eo amin'ny 160 metatra, ary manana fitehirizan-drano mahazaka eo amin'ny 66.000 metatra toratelo. Natao fitehirizana singa nalaina tamin'ny vato nandritra ny famokarana fasika ho an'ny fanorenana trano ny fitehirizan-drano taloha.
Araka ny filazan'i Patrícia Bueno Moreira, talen'ny raharaham-pitsarana ao amin'ny Territorial, namboarina tamin'ny fampiasana ny fomba famenoana avy any ambany ny tohodrano. Nanipika ihany koa izy fa tsy niasa nandritra ny herintaona mahery ny tohodrano.
“Tsy mandray fako avy amin'ny dingana fanasana fasika intsony ny tohodrano. Tontosaina tsy tapaka ny fikarohana rehetra ilaina ho an'ny fanamarinana ary milaza ny ekipa ara-teknika fa azo antoka ny rafitra”, hoy izy nilaza.
Tamin'ny taona 2017, nanatontosa fizahana ireo orinasa roa ny mpampanoa lalàna ao São Paulo. Nanasongadina izy ireo tao amin'ny tohodrano Territorial fa misy ny tsy fahatomombanana mifandraika amin'ny fanadiovana, tahaka ny tsy fahafahana mahita ny toeran'ny fanadiovana anatiny amin'ny tohodrano. Araka ny tatitra, “mety hitarika fivakisana ny fahasimban'ny toerana fanadiovana anatin'ny tohodrano”.
6 ora izayArzantina